Azia Atsimo-Atsinanana : Ny resaka ara-nofo sy fanivànana vohikala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2010 6:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, Italiano, Português, বাংলা, Swahili, 日本語, Español, English
Amin'izao fotoana izao ny fanaraha-maso ny zava-misy ao amin'ny aterineto dia raisina ho tahaka ny fanoherana ny fahalalahana miteny kanefa ireo Governemanta any Azia Atsimo-Atsinanana dia toa afaka manamarina izany amin'ny fampisehoana ny filàna hanavotra ny tanora amin'ny loza aterak'ireo fitondrantena mamoafady miresaka firaisana ara-nofo.
Ny tetika'i Indonezia hanivana ireo lahatsoratra “ratsy” ao amin'ny vohikala amin'ny alalan'ny Tarika mpanara-maso ny votoatin'ny Multimedia [Mutlimedia Content Screening team] dia nofoanana tamin'ny volana Febroary lasa teo rehefa notoherin'ny vahoaka. Androany, ity tolo-kevitra ity dia nifoha indray noho ny horonantsary mamoafady iray mahamenatra nataona olo-malaza iray izay mbola mampisafoaka ireo tanora sy antitra rehetra anivon'ny firenena izay ny ankamaron'ny mponina dia Silamo daholo. Taorian'ny fanaovan-dalàna handraràna ny fanaovana horonantsary mamoafady roa taona lasa izay, dia te-hanamafy ny lisitra maintin'ny aterineto i Indonezia ho valin'ny fangatahan'ireo mpitahiry ny nentin-drazana mba hiarovana ny toe-tsain'ireo tanora.
Nisy tranga mitovy tamin'ity horonantsary mamoafady nataon'olo-malaza ity koa tany Filipina tamin'ny herintaona izay nanome làlana tamin'ny fanaovana lalàna handraràna ny fahavetavetana. Nahazo tsiny ihany koa ny aterineto noho ny fampisehoana ireo horonantsary mamoafady izay namporisika ireo mpahay lalàna hamorona “tolo-dalàna momba ny heloka bevava anaty aterneto”.
Any Kambodza dia nanolo-kevitra ny amin'ny hametrahana “noeuds ambany fanaraha-mason'ny fanjakana” [Avy amin'ny mpandika: noeud eo amin'ny sehatry ny fampifandraisana ireo solosaina mifandrohy amin'ny aterineto no resaka eto] mba hanaraha-maso ireo mpanome tolotra aterineto rehetra izay mikendry ny hanamafy ny fiarovana ny aterineto amin'ny horonantsary mamoafady, ny halatra sy ireo heloka bevava hafa anivon'ny aterineto. Mbola tsy vita ny taratasy mikasika izany hatreto kanefa azo antoka fa hanohy ity fepetra ity ny governemanta indrindra taorian'ny tsy nahafahany nanakana ny fampakarana avy amin'ny finday sy ny aterineto horonantsary iray tsy ara-dalàna ahitàna vehivavy miboridana mandro any amin'ny monastera.
Ireo governemanta any Azia Atsimo-Atsinanana dia tsy mila ireo loza ateraky ny horonantsary mamoafady vao handràra ny vohikala satria afaka mamorona antony hafa izy ireo, tahaka ny filaminan'ny firenena (filaminana anatiny), mba hanivànana sy hanaraha-maso ny votoatin'ny aterineto. Ohatra, Thailand dia lasa firenena voalohany eran-tany nanakatona vohikala 100,000 noho ny fisiana fitaovana “mampidi-doza” tao anatiny. Manasazy ny mpitoraka blaogy izany, ireo mpanoratra sy ny mpandrindra vohikala noho ny fandikàna ny “lalànan'ny lese majeste”. Nampangain'ny Google sy McAfee ho manangana fanafihana ireo vohikala sasany amin'ny aterineto i Vietnam, indrindra indrindra ireo vohikala manohitra ny fitrandrahana bauxite, olana mahabe adihevitra manerana ny firenena.
Kanefa ny fanaraha-maso ny aterineto noho ny resa-politika indraindray ahitana fanoherana goavana avy amin'ireo mpampiasa ny aterineto ary miteraka finamelohana eran-tany foana izany, indrindra avy amin'ireo vondrona media sy ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona. Afaka minia tsy mahalala ireny tsikera ireny ireo Governemanta fa hihena tahaka izany ihany koa ny fitokisana azy ireo. Ireo Governemanta manindrahindra ny demokrasia dia tsy afaka handràra ny media amin'ny aterineto mandritra ny fotoana maharitra. Kanefa ny fanaraha-maso ny vohikala hanakanana ny famoahana ireo zava-moafady sy ireo zava-betaveta hafa dia mitarika bitsibitsika fanoherana fotsiny ihany. Lasa fitaka azo antoka entina hibahanana ireo vohikala “mampidi-doza” izany. Ny politikan'ny fanaraha-maso ny aterineto any Myanmar dia noraisina ho tahaka ny iray amin'ireo fepetra “drakoniana/henjana” napetraky ny “fitondra-miaramila” saingy ny fanapahan-keviny hanafoana ireo gazety roa mivoaka isan-kerinandro noho ny namoahany sarim-behivavy modely manao kilaoty fohy (short) dia tsy nitarika fanoherana araka ny tokony ho izy avy amin'ireo vondron'ny mpandàla demokrasia.
Ny fihizingizinana hamafa ny ara-nofo sy ireo sary mamoafady amin'ny tontolon'ny aterineto dia mety ho famantarana ny fiakaran'ny fahamailoana any amin'ireo firenena maro any Azia Atsimo-Atsinanana. Ny karatry ny ara-moraly dia nolalaovina mba hampisy eo anivon'ny vahoaka toe-tsaina mahavelom-paniriana, fihetseham-po sy fahaiza-mitondra tena na dia tsy manaraka ireo kolotsaina samihafa ao amin'ny faritra ity fomba fiasa ity. Rehefa nifidy ny lalànan'ny fanivanana ny zava-mamoafady i Indonezia, dia nanohitra izany ny governoran'i Bali noho ilay lalàna mifanohitra amin'ny fomban-drazana eo an-toerana izay mbola mampalaza ny fanamboarana tsangambato ara-tantara miboridana sy ireo dihy manaitra filàna. Rehefa nampiato ireo vohikala nampiseho sary mamoafady sy manaitaitra i Kambodza, ao anatin'izany ny reahu.net noho ny fisian'ny sarin'ireo mpandihy ny Apsara taloha miboridana sy ny miaramilan'ny Khmer Rouge.
Olana iray hafa ny famaritana tsy mazava loatra ny atao hoe sary sy fihetsika mamoafady, mahamenatra, janga, ary vetaveta. Ireo Filipiana mafana fo dia miahiahy fa ny tolo-dalàna momba ny heloka bevava anaty aterineto dia mety hanao tsy haha-ara-dalàna ny famoahana na fampakarana ireo zavatra izay manohitra ny fandikan'ny fanjakana ny hoe fitondrantena mendrika, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ary madio.
Ireo Governemanta dia nifehy ireo fitaovana sy ireo teknika fanivanana ao amin'ny media nentin-drazana. Manandrana ny fetran'ny fanaraha-maso ny aterineto izy ireo izao. Ny drafitr'i Indonezia hanamafy ny lisitra maintin'ny aterineto dia mety ho voaara-maso noho ny zavatra aterany any amin'ny faritra. Mihoatra ny 40 tapitrisa ireo mpampiasa aterineto any Indonezia ary raisina ho toy ny renivohitry ny Twitter any Azia izy. Raha mahomby ny fanivanan’ i Indonezia ny votoatin'ny vohikala, dia azo antoka fa handray izany ho modely ireo firenena hafa ao amin'ny faritra.
Tsy manapaka ny fahazoan-dàlana hijery vaovao ihany ny fanivànana ny vohikala; fa manalemy ny fahafahan'ireo mpampiasa aterineto hanangana firaisankina anaty aterineto ihany koa izany. Mba ho tena fiarovana ireo tanora sy ireo tsy manan-tsiny, ny vahaolana tena raitra dia ny fanomezana azy ireny, ny raimandrenin'izy ireny, ary ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny, ny fanabeazana mendrika sy ny fanomzeana fampahafantarana mendrika mikasika ny vokatra tsara sy ireo loza mety ateraky ny fikarokarohana any amin'ny aterineto.